DAAWO: Tan kala qabsatay qaar ka mid ah xiddigaha ugu waa wayn Arsenal kaddib markii uu dhammaaday kulankii Chelsea! – Gool FM
DAAWO: Tan kala qabsatay qaar ka mid ah xiddigaha ugu waa wayn Arsenal kaddib markii uu dhammaaday kulankii Chelsea!
(London) 06 Feb 2017. Mesut Ozil ayaa ku qeyliyay Alexis Sanchez iyo Nacho Monreal kaddib markii uu dhammaaday kulankii ay guul darada kala kulmeen Chelsea maadaama ay iska indho tireen inay u sacbo tumaan taageerayaasha Arsenal ee yimid Stamford Bridge.
Muuqaal la soo dhigay Twitter ayaa muujinayay Ozil oo ku qeylinaya Monreal iyo Sanchez kaddib markii ay si toos ah u abaareen kanaalka looga duso garoonka iyagoon u sacbo tumin taageerayaashii Gunners ee usoo safray si ay u daawadaan.
Labada ciyaaryahan ayaa dib soo eegay markii ay maqleen qeyladii Ozil, balse Monreal uun ayaa u muuqday inuu taageerayaasha u sacbo tumay halka uu Sanchez socodkiisa sii watay.
Guul darada Arsenal ku soo gaartay Stamford Bridge ayaa ahayd tii shanaad oo xiriir ah inkastoo ay dhaliyeen goolkoodii ugu horreeyay ay ku dhaliyaan garoonka Blues tan iyo bishii Janaayo ee 2013.
Manchester United oo lumin doonta £85million hadii ay u soo bixi weyso Champions League-ga
Arsenal oo dooneysa Michael Carrick